ओलीको प्रश्‍न : प्रचण्ड-माधव कसले हालेको ब्याट्रीबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? »
नयाँ परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिलाई पुनर्गठन गरेर विस्तार गर्नुपरेको बताउँदै ओलीले भने, ‘ अब यसपछिको परिस्थितिको हामीले कसरी सामना गर्ने ? उनीहरुले निहुँ त अगाडिदेखि खोजिरहेकै थिए, अब झन उनीहरुले निहुँ बनाउँछन् । त्यो निहुँ बनाएर पार्टी विभाजन गर्न खोजिरहेका छन् र प्रयास गरिरहेका छन् । परामर्श पनि नगरेर अध्यक्षलाई निस्कासन गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छन् । महाधिवेशन गर्नुपर्ने, गरिरहेका छैनन् । त्यतापटि्ट लागिराखेका छैनन् । त्यसैले आगामी अभिभाराहरु पूरा गर्न सक्ने गरी कमिटीलाई थपेर विस्तार, अर्को भाषामा भन्ने हो भने पुनर्गठन गरेर विस्तार हो यो ।मैले ४४१ केन्द्रीय कमिटी, २ जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र ४ जना पछि थपियो । ४४७ जना पहिले केन्द्रीय सदस्य र ५५६ जना मैले हिजो मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्य गरेर १००३ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनेको छ । १९६ जना खाली राखेर ११९९ जनाको कमिटी बनाइएको छ । यो कमिटी पछि हेरफेर हुन्छ ।तसर्थ ११९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । ४४७ पहिलेको र २०७७ पुस ६ गते मैले प्रथम अध्यक्षको हैसियतले आन्दोलनको बृहत्ततर हितलाई ध्यानमा राखेर मनोयन गरेका ५५६ जना गरेर यतिबेला १००३ जना मौजुद छौं । पहिला पनि कमिटीहरू यसरी नै बनिसकेपछि स्वअनुमोदन गरिएको हो । अहिलेसम्म भएका कमिटीहरू पनि संक्रमणकालीन कमिटी हुन् । -अन्नपूर्णबाट